Waxgarad iyo Aqoonyahan Soomaaliyeed oo qaylo dhaan soo saaray - Tilmaan Media
Aqoon yahan Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso todobaataneeyo ayaa soo saaray baaq ku aadan xaaladda haatan dalku ku jiro iyo sida looga bixi karo.
Aqoonyahankan ayaa baaqooda ugu magacdaray Manifesto 2, iyada oo Manifestadii 1 ay ahayd tii 114 qof ay soo saareen soddon sano kahor xilligii ay dowladdu sii dhacaysay.
Qaylo dhaantan ayaa loogu baaqay madaxda Soomaalida in ay nidaamka federaalka ilaaliyaa, wadahadal lagu xallinayo khilaafaadkana isugu yimaadaan. Iyo doorashooyinku xilligii loogu tala galay ku dhacaan.
Baaqaan ayaa kusoo aadaya xilli Soomaaliya ku jirto xaalad siyaasadeed oo cakkiran, marka la eego isfaham darrida kataagan qabsoomidda doorashooyinka.
Hoos ka akhriso Baaqa Manifesto 2
LIISKA SAXIIXAYAASHA BAYAANKA